มีคาห์ 1 TNCV - Mika 1 ASCB
1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika asekyerɛ ne “Hwan na ɔte sɛ Awurade.” Samaria ne Yerusalem: Saa nkuropɔn mmienu yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmuo a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman mmienu no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. ɛberɛ a na Yotam, Ahas ne Hesekia di adeɛ wɔ Yuda no. Anisoadehunu a ɔhunuiɛ fa Samaria ne Yerusalem ho.
montie, asase ne mo a mote so nyinaa.
Otumfoɔ Awurade redi adanseɛ atia mo,
ɔkasa firi nʼasɔredan kronkron no mu.
Atemmuo A Ɛtia Samaria Ne Yerusalem
3Monhwɛ! Awurade firi nʼatenaeɛ reba;
ɔresiane na ɔnante asase sorɔnsorɔmmea so.
4Mmepɔ nane wɔ nʼase,
mmɔnhwa mu paepae
te sɛ nsuo a ɛsiane ɔherɛ so firi kokoɔ so.
5Yei nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,
ne bɔne ahodoɔ a ɛwɔ Israel efie enti.
Yakob nnebɔne ne sɛn?
Ɛnyɛ Samaria anaa?
Na ɛhe ne Yuda sorɔnsorɔmmea?
Ɛnyɛ Yerusalem anaa?
6“Enti mɛyɛ Samaria kuro no mmubuiɛ sie,
Mehwie nʼaboɔ agu bɔnhwa mu
7Wɔbɛbubu nʼahoni nyinaa mu asinasini;
wɔde ogya bɛhyɛ nʼasɔredan mu ayɛyɛdeɛ nyinaa.
Mɛsɛe ne nsɛsodeɛ nyinaa.
Esiane sɛ nʼakyɛdeɛ a waboa ano no nyinaa
ɔnya firii adwamanfoɔ akatua mu no enti
wɔde bɛma adwamanfoɔ.”
Osu Ne Awerɛhoɔ
8Yeinom enti mɛsu atwa agyaadwoɔ;
mede adagya bɛnante na mennhyɛ mpaboa.
Mɛpɔ so sɛ odompo
na masu sɛ ɔpatuo.
9Nʼapirakuro no wuo ayɛ den;
Abɛduru me nkurɔfoɔ ɛpono ano
mpo aduru Yerusalem ankasa.
Mo a mowɔ Bet-Leafra deɛ
monyantam mfuturo mu.
11Monsene nkɔ adagya ne aniwuo mu,
Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue
Bet-Esel wɔ awerɛhoɔ mu;
ɛfiri sɛ, wo hɔ na ɔnya ne banbɔ.
12Wɔn a wɔte Marot de ɔyea nukanuka wɔ mu
ɛfiri sɛ amanehunu a ɛfiri Awurade hɔ aba
abɛduru Yerusalem ɛpono ano.
monsiesie nteaseɛnam no.
Mo ne bɔne farebae
ma Ɔbabaa Sion,
na modii Israel anim kɔɔ bɔne mu.
14Enti mode ntetemu akyɛdeɛ bɛma Moreset-Gat,
Aksib kuro bɛdaadaa Israel ahemfo.
15Mede nkonimdifoɔ bɛtoa mo
Deɛ ɔyɛ Israel onimuonyamfoɔ no
16Monyi mo tirinwi mfa nni awerɛhoɔ,
mommɔ tikwa te sɛ ɔpete,
ɛfiri sɛ, wɔbɛfa wɔn afiri mo nkyɛn
akɔ nnommumfa mu.
ASCB : Mika 1